Ciidamadda kenya oo isku diyaarinaya soo badbaadinta dhakhaatir dalkeeda laga afduubtay – Radio Daljir
Ciidamadda kenya oo isku diyaarinaya soo badbaadinta dhakhaatir dalkeeda laga afduubtay
Abriil 22, 2019 4:25 b 0
Ciidanka Sirdoonka Kenya ayaa isku diyaarinaya in ay howlgal ka fulinayaan Soomaaliya sidda ay shaaciyeen qaar ka mid ah Warbaahinta dowladda Kenya.
Ciidankaan ayaa la sheegay in ay ku raad jooggaan Koox hubeysan oo dhawaan dhaqaatiir u dhalatay dalka Cuba kasoo Afduubtay Magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Dowladda Kenya ayaa ballanqaaday in ay dooneyso in ay soo soo furato dhaqaatiirkaasi oo la aaminsan yahay in Koox hubeysan in ay ku heystaan Gudaha Soomaliya.
Howlgalka dadkaasi lagu soo furanaayo ayaa waxaa ka qeyb qaadan doona Ciidanka Sirdoonka Kenya, Milatariga iyo Booliska.
Ciidamadda Booliska Gobalka Bari oo diwaan galin ku wadda gadiidka dadweynaha (Daawo)
Bacaha iyo dhaqan gelid la’aanta joojinteeda, iyo sida lagu joojin karro (Daawo)